Zimbabwe Inocherechedza Zuva reWorld Press Freedom
HARARE — Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzekuburitswa kwemashoko nevatori venhau pasi rose, re World Press Freddom Day
Vachitaura pamhemberero dzaitirwa paAfrica Unity Square, vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, VaMichael Chideme, vati sangano ravo harisi kufara nekushomeka kwemari dzinotambiriswa vatori venhau.
VaChideme vati vashandirwi vanofanirwa kuona kuti vashandi vavo vawanirwa zvinhu zvinodiwa pakuita basa ravo, kuitira kuti vatori venhau varemekedzwe.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, mutevedzeri wegurukota rinowona nezvekuburitswa kwemashoko, VaMurisi Zwizwai, vatiwo hurumende ichawona zvaingaite kuti pave nenhepfenyuro dzakazvimirira dzakawanda munyika. Vatiwo nhepfenyuro dzemumatunhu, Community Radios, dzinofanirawo kupiwa marezenesi.
VaZwizwai vakurudzira kuti vatori venhau varemekedzwe pachaitwa sarudzo gore rino, kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasingatye uye vakasununguka.
Zimbabwe yacherechedza zuva iri muhurumende yemubatanidzwa muine kunetsana pamusoro penyaya yekuvandudzwa kwemashandiro enhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inonzi inoshanda iine divi rayakarerekera munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende.
Nyaya yekuvandudzwa kwemashandiro evatori venhau, imwe yenyaya dziri kunetsa munyika, iyo yakatopirwa kumutongi gava, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekutorwa kwenhau munyika, Zimbabwe yanyemwerera neChishanu apo mutori wenhau, Amai Edna Machirori, vadomwa semumwe wevanhukadzi vapihwa mubairo we 2013 Lifetime Achievement Award nesangano reInternational Women’s Media Foundation.
Mumashoko aburitswa muWashington, Amai Machirori mumwe wevatori venhau vechidzimai vana vachatambidzwa mibairo yavo muna Gumiguru pamabiko achaitirwa muNew York neLos Angeles ku America.
Amai Machirori ndivo vakava mupepeti wenhau wekutanga wechidzimai, uye vakashanda kumapepanhau eChronicle, Financial Gazette neDaily News. Pari zvino Amai Muchirori vari kushanda vakazvimirira vachiburitsa nyaya dzine chekuita nehuori pamwe nedzebudiriro.
Mune imwewo nyaya ine chekuita nekutorwa kwenhau, mutungamiri weMalawi, Amai Joyce Banda, vanonzi varamba kutsigira gwaro re 2007 Declaration of Table Mountain, iro rinokurudzira kubviswa kwemitemo inoomesera vatori venhau yakaita se Criminal Defamation ne Insult Laws.
Ukuwo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pasi rose, reCommittee to Project Journalists, VaJoel Simon, vanyorera sachigaro weAfrican Union, Amai Nkosazana Dlamini Zuma, vachivakurudzira kuti vatori vose venhau vari mumajeri mu Africa, vaburitswe mumajeri aya.
Va Simon vati vatori venhau makumi mana nemumwe vacherechedza zuva reWorld Press Freedom vari mumajeri mu Africa yose.
Vatiwo vakakonzeresa kufa kwevatori venhau vari pabasa, vanofanirwa kumiswa pamberi pematare.
Vatiwo hapana chakaitwa kuvanhu nedzihurumende vane chekuita nekuurayiwa muAfrica kwevatori venhau vanodarika makumi masere kubva muna 1992 kusvika pari zvino. Vati nyika dziri pamusoro mukupondwa kwevatori venhau i Nigeria ne Somalia.